Ithuba Elimangazayo Lokumaketha Eliza Ne-IoT | Martech Zone
NgoMgqibelo, Ephreli 7, 2018 NgoLwesine, Februwari 25, 2021 Douglas Karr
Esontweni noma ngaphezulu edlule ngacelwa ukuba ngikhulume emcimbini wesifunda on Inthanethi Things. Njengokubamba ngokuhlanganyela kwe I-Dell Luminaries podcast, Ngithole ithoni yokuchayeka kwi-Edge computing kanye nobuchwepheshe obusha obusivele busenzeka. Kodwa-ke, uma wenza usesho lwe- amathuba wokumaketha maqondana ne-IoT, ngokuthembekile azikho izingxoxo eziningi online. Eqinisweni, ngidumele ngoba i-IoT izoguqula ubudlelwano phakathi kwekhasimende nebhizinisi.
Kungani i-IoT iguquka?
Kunokuqanjwa okusha okusha okuza ngokoqobo okuzoguqula i-IoT:
I-5G Wireless izonika amandla isivinini somkhawulokudonsa esizo susa ukuxhumana okunezintambo ngaphakathi kwebhizinisi kanye nebhizinisi. Ukuhlolwa kufinyelele isivinini ngaphezu kwe-1Ama-Gbit / s ibanga elifinyelela kumakhilomitha ama-2.
I-Miniaturization zezinto zekhompyutha ezinamandla akhulayo wekhompyutha zizokwenza amadivayisi we-IoT ahlakaniphe ngaphandle kwesidingo samandla kagesi amaningi. Amakhompyutha amancane kunendibilishi angasebenza ngokungapheli ngamandla elanga kanye / noma ukushaja okungenantambo.
Security ukuthuthuka kufakwa ngaphakathi kwamadivayisi kunokuba kushiyelwe kubathengi namabhizinisi ukuze bazitholele bona.
The izindleko ze-IoT amadivayisi awenza angabizi. Futhi ukuthuthuka kokujikeleza okuphrintiwe kuzokwenza izinkampani zikwazi ukuklama nokwenza izinto zazo ze-IoT - okuvumela ukusetshenziswa kwazo yonke indawo. Ngisho nezibonisi eziguquguqukayo ze-OLED zisondele ekhoneni - zinikeza izindlela zokubonisa imilayezo noma kuphi.
Ngakho-ke Uzokumaketha Kanjani Lo Mphumela?
Cabanga ngokuthi abathengi bayithole futhi bayicwaninga kanjani imikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwe amabhizinisi kule minyaka eyikhulu edlule.
Imakethe - Eminyakeni eyikhulu eyedlule, ikhasimende lafunda ngomkhiqizo noma insizakalo ngqo kumuntu noma ibhizinisi elithengisayo. Ukumaketha (okubizwa kanjalo) kwakuyikhono labo lokuthengisa ku- emakethe.
Imidiya Ehanjisiwe - Njengoba abezindaba batholakala, njengomshini wokuphrinta, amabhizinisi manje aba nethuba lokukhangisa ngale kwezwi labo - emiphakathini yabo nangale kwayo.
IMedia Media - Kwavela imithombo yezindaba, manje enikeza amabhizinisi amandla okufinyelela ezinkulungwaneni noma ezigidini zabantu. Imeyili eqondile, ithelevishini, umsakazo… noma ngabe ngubani ophethe izethameli angakhipha amadola abalulekile ukufinyelela lezo zilaleli. Kwakusemthethweni, imboni yezokukhangisa yakhula yaba ngamabanga aphakeme kakhulu nenzuzo. Uma amabhizinisi efisa ukuchuma, bekufanele basebenze ngamasango akhokhelwayo abakhangisi.
I-Digital Media - I-Intanethi kanye nabezindaba zenhlalo banikeze ithuba elisha elizoqhatha abezindaba. Izinkampani manje sezingasebenza ekukhangiseni ngomlomo ngokusesha nangeziteshi zenhlalo ukwakha ukuqwashisa nokuxhumana nezithameli ezihlosiwe. Vele, iGoogle neFacebook bathathe ithuba lokwakha amasango wenzuzo alandelayo phakathi kwebhizinisi nomthengi.
Isikhathi Esisha Sokumaketha: IoT
Isikhathi esisha sokumaketha sesifikile kithi esijabulisa kakhulu kunanoma yini esake sayibona ngaphambili. I-IoT izohlinzeka ngamathuba amahle kakhulu esingakaze siwabone ngaphambili - ithuba lokuthi amabhizinisi adlule yonke imigwaqo futhi axhumane, futhi, ngqo namathemba namakhasimende.
Ngaphakathi kwezethulo, umngani omuhle futhi Isazi se-IoT uJohn McDonald inikeze umbono omangalisayo ngekusasa lethu eliseduze. Uchaze izimoto zanamuhla namandla amangalisayo wekhompyutha asevele enawo. Uma zivunyelwe, izimoto zingakwazi ukuxhumana njengamanje nabanikazi bazo, zibazise ukuthi ziyaluka futhi zikhathele. Izimoto zingakutshela ukuthi uthathe umgwaqo olandelayo bese zikukhomba ku-Starbucks eseduze… ngisho nokukuhlelela isiphuzo sakho osithandayo.
Ake sithathe elinye igxathu. Kuthiwani uma, esikhundleni salokho, i-Starbucks inikeze ngomgibeli wabagibeli nobuchwepheshe be-IoT obuxhumana ngqo nemoto yakho, ukuma kwayo emhlabeni wonke, izinzwa zayo, kanye nomgibeli wabagibeli bakwazisa ukuthi isiphuzo sakho si-odiwe futhi sizophuma lapho kuphuma khona okulandelayo. Manje, i-Starbucks ayincikile esangweni lokukhokha nokuxhumana nomthengi, bangaxhumana ngqo nomthengi.
IoT Izoba Yonke Indawo, Kukho konke
Sesibonile lapho izinkampani zomshuwalense zinikeza khona izaphulelo uma ufaka idivaysi emotweni yakho exhumanisa izindlela zakho zokushayela nenkampani. Ake sihlole amathuba amaningi:
Idivayisi yakho yomshuwalense ozenzakalelayo ixhumana nezikhombisi-ndlela ezisebenza kangcono ngokushayela ngokuya ngemikhuba yakho yokushayela, izindawo zokugwema izingozi, noma izindlela zokukusiza ukukugcina uphephile.
Amabhokisi akho e-Amazon anezinto ze-IoT ezixhumana ngqo nawe ukukubonisa indawo ezikuyo ukuze ukwazi ukuhlangabezana nazo lapho zikhona.
Inkampani yakho yasekhaya yasekhaya ifaka amadivayisi we-IoT ekhaya lakho ngaphandle kwenkokhiso ethola iziphepho, umswakama, noma ngisho nezinambuzane - ikunikeze ithuba lokuthola insizakalo ngokushesha. Mhlawumbe baze bakunikeze nesithembiso sokudlulisela omakhelwane bakho.
Isikole sengane yakho sikunikeza ukufinyelela kwe-IoT ekilasini ukuze ubuyekeze indlela yokuziphatha kwengane yakho, izinselelo noma imiklomelo yakho. Ungahle ukwazi ukuxhumana nabo ngqo uma kunenkinga ephuthumayo.
Umthengisi wakho wezezindlu ushumeka amadivayisi we-IoT kulo lonke ikhaya lakho ukuhlinzeka ngohambo olubonakalayo nolukude, olukwazi ukuhlangana, ukubingelela, nokuphendula imibuzo kubathengi abangaba khona nganoma yisiphi isikhathi sosuku noma sebusuku lapho kufaneleka ngabo bobabili amaqembu. Lawo madivayisi akhubazeka ngokuzenzakalela uma usekhaya futhi unikeza imvume kushejuli yakho.
Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuletha izinzwa zangaphakathi noma zangaphandle ozigqokayo noma ozigayayo ezinikezela ngemininingwane ebalulekile kuDokotela. Lokhu kukuvumela ukuthi ugweme izibhedlela ngokuphelele, lapho kukhona ubungozi bokutheleleka noma ukugula.
Ipulazi lakho langakini linikezela ngamadivayisi we-IoT axhumana nezinkinga zokuphepha kokudla noma aletha inyama, imifino, futhi akhiqize kahle ngesikhathi esifanele nawe. Abalimi bangakwazi ukwandisa imizila ukubikezela ukusetshenziswa ngaphandle kokuthi bathengise kuma-megastores okuthenga ngentengo encane yentengo. Abalimi bayachuma futhi abantu bonga ekusetshenzisweni kukawoyela okungadingekile kokulethwa nokusatshalaliswa kwabantu abaningi.
Okuhle kunakho konke, abathengi bazoba nokulawula idatha yethu nokuthi ngubani ongayifinyelela, ukuthi bangayifinyelela kanjani nokuthi bangayithola nini. Abathengi bazokuhweba ngenjabulo idatha lapho bazi ukuthi leyo datha ibabuyisela inani futhi iphathwa ngendlela efanele. Nge-IoT, amabhizinisi angakha ubudlelwano obuthembekile nomthengi lapho azi khona ukuthi idatha yakhe ngeke ithengiswe. Futhi izinhlelo ngokwazo zizoqinisekisa ukuthi idatha igcinwa iphephile futhi ivikelekile. Abathengi bazofuna ukusebenzisana kanye nokuhambisana.
Ngakho-ke, kuthiwani ngebhizinisi lakho - ungabuguqula kanjani ubudlelwano bakho namathemba kanye nabathengi uma ubunokuxhumana okuqondile futhi ukwazi ukuxhumana nabo ngqo? Kungcono uqale ucabange ngakho namhlanje… noma inkampani yakho ingahle ingakwazi ukuncintisana kungekudala.
Tags: 5ginkathiIotukuxhumana kwezokukhangisa